निर्वाचन बिशेषः प्रदेश नम्बर २ मा को बलियो ? यस्ताे छ पूरानाे अङ्कगणित – नेपाली सूर्य
November 18, 2017 Nepali SuryaLeaveaComment on निर्वाचन बिशेषः प्रदेश नम्बर २ मा को बलियो ? यस्ताे छ पूरानाे अङ्कगणित
अाशन्न प्रतिनीधिसभा र प्रदेशसभा चुनाबकाे प्रचार प्रसार र तयारीलार्इ निर्वाचन अायाेग तथा राजनीतिक दलहरूले तिब्रता दिइरहेका बेला हारजीतकाे पनि अांकलन हुन थालेकाे छ । बिकासे नारालार्इ प्राथमिकतामा राखेर चुनाबमा हाेमिएका दलहरूले मतदातालार्इ प्रभाब पार्न बिभिन्न अाश्वासनहरू बाँडिरहेका छन् । एमाले र माअाेवादी केन्द्रबीचकाे बाम तालमेल र कांग्रेससहितकाे लाेकतान्त्रिक शक्तिहरूकाेबीचकाे प्रतिस्पर्धा राेचक हुने अनुमान गरिएकाे छ । मंसिर १० र २१ मा दुइचरणमा हुने चुनाबमा पहाडमा वाम गठबन्धन र लोतान्त्रिक गठबन्धनबीच प्रतिस्पर्धा देखिएपनि तराई मधेसमा त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । विशेषगरि प्रदेश नम्बर २ मा त्रिपक्षीइ रोचक प्रतिस्पर्धा छ । तराइ मधेशका ८ जिल्ला सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महाेत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, र राैतहटमा मंसिर २१ गते चुनाब हुँदैछ ।
पहिलो र दोस्रो संविधानसभा चुनाव तथा हालैसम्पन्न सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावको मतपरिणाम अनुसार कुन पार्टीको अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर चर्चा पनि हुन थालेको छ । स्थानीय चुनाबमा जसरी नै यसपटक पनि प्रदेश नम्बर २ काे चुनाबलार्इ निकै चासाेका साथ हेरिएकाे छ । यहाँ मधेशबादी दल तथा नेपाली कांग्रेसकाे पकड रहेकाे छ । तर यसपटक नेकपा एमाले र नेकपा माअाेवादी केन्द्रबीच भएकाे बाम एकताका कारण पनि मतपरिणाम जस्ताे पनि अाउनसक्के धेरैकाे अड्कल छ । आठ जिल्ला र १ सय ३६ स्थानीय तह रहेको २ नम्बर प्रदेशमा ४० तहमा जित्दै कांग्रेस स्थानीय तहको चुनावमा पहिलो पार्टी बनेको थियो । प्रदेश २ बाट ३२ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र ६४ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वा्चित हुनेछन् ।
पूर्वगृमन्त्री बिमलेन्द्र निधीकाे प्रतिष्ठाकाे लडाइँ
मधेश केन्द्रित दलका शिर्ष नेताहरू यही प्रदेशबाट चुनाब लड्दैछन् । यसमध्य पनि धनुषा ३ काे चुनाबी लडाइँकाे सबैकाे चासाे बढेकाे छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पूर्प गृहमनत्री समेत रहेका पुभाबशाली नेता बिमलेन्द्र नीधि र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महताे एकै क्षेत्रबाट प्रतिनीधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका छन् । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो सर्लाहीका हुन् । तर, योपटक उनले धनुषामा निधिसँगको चुनावी प्रतिस्पर्धा रोजेका छन् । नीधिले महताेलार्इ प्रमूख प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिएका छन् । उनले महताेलार्इ उम्मेदवार बन्नबाट राेक्न तालमेलकाे प्रयास पनि गरेका थिए ।
कस्तो छ निधि र महतोको अवस्था ?
धनुषा ३ मा जनकपुर उपमहानगरको १ देखि १६ र २०, २३ देखि २५ वडा पर्छ । यस्तै नगराइन नगरपालिकाका साथै धनौजी र मुखियापट्टी मुसहरमिया गाउँपालिका र विदेह नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ यो क्षेत्रमा पर्छ । स्थानीय चुनावमा नगराइन र धनौजी र मुखियापट्टी कांग्रेसले जितेको थियो भने जनकपुर उपमहानरमा राजपा १० हजार मतान्तरले विजयी भएको थियो । तर, यो क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहहरुका वडाध्यक्षको मत विश्लेषण गर्दा कांग्रेसको १८ हजार १३१ र राजपा-फोरम गठबन्धनको १७ हजार २८० मत छ ।
निधिको प्रतिष्ठासँग जोडिएको स्थानीय चुनावमा उनको पार्टी नराम्ररी पराजित भयो । उनले पार्टीका प्रमुख दावेदारहरुलाई छाडेर विश्वासपात्र मनोजकुमार साहलाई मेयरको टिकट दिएका थिए । तर, राजपाका लालकिशोर साहले त्यहाँ चुनाव जितेका थिए । राजपाका नेताहरुका अनुसार महतोले धनुषा ३ बाटै प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिनुको कारण जनकपुर उपमहानरको नजिता पनि हो । तर, स्थानीय तहको मतका आधारमा निधि वा महतो कसैको हारजित अनुमान लगाउन सकिन्न ।
बिगतका चुनाबकाे नतिजा कस्ताे छ ?
हालै सम्पन्न स्थानिय तहको चुनावमा पाएको मत हेर्दा १५ स्थानमा वामगठबन्धन, १० स्थानमा मधेसवादी दलको गठबन्धन र ६ कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक अगाडी देखिन्छ । प्रदेश नम्वर २ का ८ जिल्लाबाट २७ लाख ६७ हजार ३ सय ७५ जना मतदाताले आउँदो मंसीर २१ गते ३२ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र ६४ जना प्रदेशसभा सदस्यका मतदान गर्दैछन् । पहिचानको लागि लामो लडाइ लडेको प्रदेश नं २ का मतदाता प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य चयन गर्न तयारी अवस्थामा छन् । २ हजार १ सय ६६ मतदान स्थल तोकिएको २ नम्वर प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा ३ हजार ६ सय ७९ मतदान केन्द्र छन् ।
प्रदेश नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ५ सय ४२ जना र प्रदेशसभाको लागि ९ सय ८५ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । सबैजसाे दलका नेताहरूरले स्थानीय स्राेत साधकाे समुचित प्रयाेग गरी प्रदेश नम्बर २ लार्इ समृद्ध र नमुना बनाने बताउँदै अाएका छन् ।
अन्य प्रदेशमा जस्तै प्रदेश नम्वर २ मा पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको वाम गठबन्धन, संघिय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको गठवन्धन चुनाबी मैदानमा छ । नेपाली कांग्रेस केही ठाउँमा गठबन्धन र धेरै ठाउँमा एक्लै चुनाव लड्दैछ । लामो समय पहिचानको लडाई लडेका मधेशवादी दल, सम्मेलित संघिय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको गठबन्धनले अझै पनि आफ्ना एजेन्डा तय गर्न सकेको छैन । तर पनि पहिचान र समृद्धीकाे नारालार्इ नै यी दलहरूले पनि खास जाेड दिएकाे देखिन्छ ।
मधेशका जिल्ला मात्रै समेटिएकाे प्रदेश नम्बर २ मा संविधान सभाको चुनावमा ४० स्थानमा जितसहित कांग्रेस अगाडी, दोस्रोमा २६ स्थानमा जितेको संघिय समाजवादी दोस्रो र २५ स्थानमा जितेको राष्ट्रिय जनता पार्टी तेस्रोमा देखिन्थ्यो । स्थानिय तहको चुनावमा पाएको मत हेर्दा १५ स्थानमा वामगठबन्धन, १० स्थानमा मधेसवादी दलको गठबन्धन र ६ कांग्रेस नेतृत्वको लोकतान्त्रिक अगाडी देखिन्छ । तराईका अरु जिल्लामा एउटा र प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा अर्को खालको प्रतिस्पर्धामा छ । यहाँ स्वतन्त्र मतदाताहरू धेरै रहेकाले पनि दलहरू उनीहरूलार्इ प्रभाब पार्ने कसरतमा लागेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस जत्तिको अर्को पार्टी नेपालमा मात्रहोइन दक्षिण एशियामै छैन् : प्रदीप गिरि